Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ndị njem na -eme emume ncheta afọ nke anọ ha
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Entertainment • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Seychelles na -eme emume ncheta ndị njem ụwa
A ga -eme emume nlegharị anya ụwa nke afọ a na mpaghara n'okpuru isiokwu bụ "ịkpụzi ọdịnihu anyị" onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya, oriakụ Sherin Francis, kwuputara na mkparịta akụkọ mgbasa ozi nke emere na Mọnde, Septemba 20, 2021, na Botanical House. A ga-eme emume ga-ewe otu izu site na Septemba 27, 2021, ruo Ọktọba 2, 2021. A họpụtara isiokwu "ịkpụzi ọdịnihu anyị" ọ bụghị naanị ito onyinye nke ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ kamakwa ndị Seychelles na njedebe.
Ahọrọ isiokwu a iji too onyinye ndị na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ yana ndị Seychelles na ebe ọ na -aga.
Ememe njem ahụ ga -agụnye adreesị nke Minista na -ahụ maka njem, na -ekpughere ndị a na -asọpụrụ dị ka "ndị ọsụ ụzọ njem."
Ụmụaka ga -esokwa na -agba ajụjụ ọnụ gbasara ndị njem.
A họpụtara isiokwu "Ịkpụzi ọdịnihu anyị" ka ọ bụghị naanị too onyinye nke ndị na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ kamakwa ndị nke Seychelles na ebe a na -aga ka ngalaba njem na -akwali isonye obodo na distrikti na ụlọ ọrụ njem. A na -eme emume nlegharị anya ụwa niile nke United Nation World Tourism Organisation (UNWTO) n'okpuru isiokwu bụ "Njem Nleta maka Uto Dị Mfe."
“Ememe ndị njem bụ oge pụrụ iche maka anyị ka anyị na -ewepụta oge ọ bụghị naanị ime ememme na mbata anyị kamakwa ịtụgharị uche na ọnọdụ ụlọ ọrụ anyị,” PS Francis kwuru ka ọ na -ewepụta kalenda ihe omume iji gosi njem nlegharị anya kwa afọ. izu.
Ndị a ga -agụnye adreesị nke Mịnịsta na -ahụ maka njem nlegharị anya Sylvestre Radegonde gwara Mgbakọ Mba ahụ, mkpughe nke ndị a na -asọpụrụ dị ka “Ndị Nleta Njem Nleta”, usoro ngosi na mkparịta ụka na mmemme dị mkpa na redio, telivishọn, na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta gụnyere. ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ dị mkpa yana mwepụta asọmpi foto n'etiti ndị ọzọ. Ụmụaka ga -esonyekwa ka ha na -agba ajụjụ gbasara ndị njem na ọwa YouTube nke ngalaba ndị njem.
Ọhụrụ n'afọ a bụ mmemme mmetụta n'ụdị mmemme osisi, nke a ga -eme na Ọktoba 2, 2021. PS Francis kwuru na emume a na -akwalite mkpebi ebe ọ na -aga maka nkwado na mbọ ya ka ọ bụrụ ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ndị otu ndị Seychelles A na -akpọ ndị obodo ka ha kwado ọrụ n'ime obodo na agbata obi site n'ịkụ osisi.
PS Francis kwupụtara ịkwa ụta ya na n'ihi ọnọdụ na -aga n'ihu na ọrịa na -efe efe, ọha mmadụ agaghị enwe ike isonye na mmadụ maka mmemme ahụ, ihe omume ga -abụkwa site na ịkpọ oku naanị ndị nwere oke ma ọ bụ nwee ịntanetị.
“Anyị emezigharịla ihe omume anyị n'ihe banyere usoro ahụike ọha dị. N'agbanyeghị mmachi, anyị nwere afọ ojuju na ihe omume anyị na -egosipụta mmemme mmụta iji tinye ndị na -eto eto anyị na ihe omume na -adigide iji nọgide na -agba mbọ idobe ebe a na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ”Oriakụ Francis kwuru.
Ọhaneze ga -enwekwa ike ịnụ ụtọ ihe omume ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ gụnyere mkparịta ụka panel na Concours d'Expression Orale nke ụmụ akwụkwọ ga -eme ka ihe omume a ga -agbasa ma ọ bụ gbasaa. Site na obere mgbanwe na mmemme ahụ, a ga -egosipụta mmemme oriri na mmemme ahụ ọzọ n'afọ a ka ndị njem ga -anabata ihe omume nke ụlọ nke ha.
Ememe njem ndị a na -eme kwa afọ bụ ndọtị nke ụbọchị njem nlegharị anya ụwa kwa afọ nke a na -eme na Septemba 27 nke World Tourism Organisation (UNWTO) malitere.